Cumar C/rashiid oo ku guuleystay xubintii ugu horeysay Aqalka sare ee Puntland – STAR FM SOMALIA
Cumar C/rashiid oo ku guuleystay xubintii ugu horeysay Aqalka sare ee Puntland
Cumar C/rashiid Cali Sharmaake, Ra’iisul Wasaaraha Somaliya ayaa ku guuleystay xubintii ugu horeysay ee Aqalka Sare deeganada Maamulka Puntland, kadib markii uu ka adkaaday Cumar haweenay la tartamaysay.
Ra’iisul Wasaaraha Somaliya ayaa la tartamaayay Haweenay lagu magacaabo Aamina Aadan oo heshay codad gaaraya 17 cod, halka Ra’iisul Wasaarahana uu xaqiijiyay codad gaaraya 47 cod, sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Puntland Axmed Cali Xaashi.
Waxaa xusid mudan saddex cod oo ka mid codadkii ay dhiibteen Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Puntland inay noqdeen kuwa halaabay sida Guddiga ay sheegeen.
Kursiga Aqalka Sare ee uu u tartamaayay Cumar C/rashiid ayaa soo gaba gaboobay, waxaana loo gudbay Kuraasta kale ee ay u tartamayaan Musharaxiinta kale ee u taagan qabashada Aqalka Sare ee Deeganada Maamulka Puntland.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Puntland C/xakiin Camey ayaa ku sugan madasha Doorashada ay ka socoto ee xarunta Baarlamaanka Maamulka Puntland.
Fadhiga Baarlamaanka saaka markii uu furmay ayaa la dhageystay Khudbad kooban uu jeediyay Ra’iisul Wasaaraha Somaliya wuxuuna ka hadlay Taariiqdiisa oo kooban.
Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Puntland ayaa u codeynaya Kuraasta kale ee ay u tartamayaan Xubnaha Aqalka Sare doonaya inay ku biiraan.
Puntland Aqalka sare waxa ay ka heshay kuraas gaareysa 11 xubnood.
Madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle oo Xalane kula kulmay Wakiilada Beesha Caalamka